Dhalinyaro soomaali ah oo shaley nin mobil uga furtay Grønland. - NorSom News
Dhalinyaro soomaali ah oo shaley nin mobil uga furtay Grønland.
Wargeyska Aftenposten ayaa qoraya in sadex dhalinyaro soomaali ah ay shaley galabkii nin mobil kaga furteen xaafada Grønland. Booliska ayaa sheegay iney ku raadjoogeen dhalinayaradaas, walina aysan jirin cid ay qabteen.
Ninka la dhacay ayaa rabey inuu baabuurkiisa ku parking gareeyo wadada Mandalls gate. Dhalinyaradan sadexda ah ayaa weydiiyeen lacag 100 kr-. Waxeyna ku intaas kadib ku qabteen mindi, markii uu isku dayey inuu dhaqaaqana waxey baabuurkiisa gaarsiiyeen dhowr jug. Ugu danbeyna waxey ka xoogeen moobilkiisa gacanta.
Aftenposten ayaa qoreyso in Ninka dhaca loo geystay uu sheegay in dhalinyarada dhacdey mindida ugu hanjabtey, mobilkana ka xoogtey ay ahaayeen Soomaali.
Madaxa howlgalka booliska Oslo ayaa sheegay in dhalinyaradan ay dhicin karto iney yihiin kuwo falal danbiyeedyo noocan oo kale ah ka geystey aagaas, ayna u badantahay iney daganyihiin aaga meesha uu falku ka dhacay.
Previous articleLa Bushro Jama få bli: Ardada iskuulka Hadsel oo taageero weyn u muujiyey Bushro
Next articleKusoo talo gal: Cimiladu bari waa mid qabow, barafna uu la socdo..